गगनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, गोविन्द केसीको ज्यान तल माथि भए दोषी तपाई नै Canada Nepal
गगनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, गोविन्द केसीको ज्यान तल माथि भए दोषी तपाई नै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको ज्यान तल माथि भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोषी हुने चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारसहितका ६ बुँदे माग राखेर डा. गोविन्द केसी गत भदौ २९ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसिरहेका छन् ।
उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएका बेला सोमबार फेसबुकमा गगनले लेखेका छन् :
प्रधानमन्त्रीज्यू,डा.गोविन्द केसीले राख्नुभएको कुन चाहिँ माग पूरा नहुनेरगर्न नसकिने छ? कुन माग जनहित विपरीत छन् ? तपाईँ आफैले हिजो गरेको बाचा पूरा नगर्दा नै यी विषय आज माग बनेका होइनन् र?
डा.केसीसंग संवाद नै गर्दिन भन्ने तपाईँको हठले के तपाईँको मान बढाउँछ? पुरा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने माग छन्,पूरा गर्नुहोस्।यसमा हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ।तर,एउटा सत्याग्रहीमाथि दुराग्रह राखेर बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यसको ठुलो मूल्य तपाईँले चुकाउनु पर्नेछ।
प्रमज्यू ,ख्याल राख्नुहोला,यदि डा.केसीको जीवन तल माथि भयो भने यसको शत प्रतिशत दोषी तपाईँ हो।
आश्विन १९, २०७७ सोमवार १२:२६:१८ बजे : प्रकाशित